Cancer – စာမကျြနှာ9– Healthy Life Journal
ကင်ဆာလူနာ သက်ရှည်ကျန်းမာခြင်းအပေါ် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး၏ အမြင်
ဒေါက်တာဦးအုန်းကျော် စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး (အငြိမ်းစား) မှဖြေကြားသည် ကင်ဆာရောဂါရှင်ဟာ ကုသမှုကိုလက်မခံငြင်းဆန်တဲ့ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ (၁) ရောဂါနှင့်ကုသမှုအကြောင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားမလည်ခြင်း ကင်ဆာရောဂါကုထုံးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို မခံစားလိုတာ၊ ရောဂါကုထုံးတွေရဲ့ ကုသနိုင်မှုစွမ်းရည်ကို သံသယရှိတာတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုတွေက...
ဆရာဝန်တွေတောင် အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ သေရွာပြန် ကင်ဆာဝေဒနာရှင် ဒေါ်ယဉ်မွန်သန်း
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) “သမီး . . ယဉ်မွန်သန်းမဟုတ်လား၊ သမီးအသက်ရှင်တုန်းပဲနော်၊ လန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲ . .” ပန်းလှိုင်ဆေးရုံကြီးတွင် သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးသိန်းမြင့်သူနှင့် တွေ့ဆုံခိုက် ဆရာကြီးက လွန်ခဲ့သော ရှစ်နှစ်ခန့်က လူနာဖြစ်သူဒေါ်ယဉ်မွန်သန်းကို တွေ့တွေ့ချင်း လွန်စွာ...
ကင်ဆာလူနာ သက်ရှည်ကျန်းမာခြင်း အပေါ် သားဖွားမီးယပ် အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး၏ အမြင်
“ ဒီလိုလူနာတွေကို တစ်ခါတစ်ခါတော့ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဘ၀မှာ သုံး/လေးယောက်လောက် တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကင်ဆာလူနာတို့ ဘာသာတရားဖြင့် ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်း (Religious Coping With Cancer) ဆိုင်ရာ သုတေသန စာတမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကို လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ ဘာသာတရားနဲ့ နေထိုင်တာက...
သားဥအိမ်ကင်ဆာဖြစ်မှာ စိုးကြောက်နေသူတို့အတွက် . . .
၊ မီမိုး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ သားဥအိမ်ကင်ဆာက အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ကင်ဆာရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရောဂါအဆင့်နုစဉ်မှာ ဘာလက္ခဏာဝေဒနာမှ မပြတတ်ဘဲ ရောဂါရင့်မှ သိရတဲ့အတွက် အသံတိတ်လူသတ်သမားလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ သက်ကြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ သားဥအိမ်ကင်ဆာ အဖြစ်များတတ်ပြီး အထူးသဖြင့် အသက်...
ကင်ဆာဖြစ်ရသည်မှာ ကံတရား သက်သက်ကြောင့်သာ မဟုတ်
ဇွန် ကင်ဆာဖြစ်ရတာက ကံတရားကြောင့် သာမကဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေခံအကြောင်း တရားတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အစပိုင်း လေ့လာမှုအရ ဆေးလိပ်သောက်တာလို အကြောင်းခံကြောင့် ကင်ဆာ သုံးပုံနှစ်ပုံဖြစ်စေတယ်လို့ ဆေးပညာရှင်တွေက ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ နယူးယောက်အခြေစိုက်ှStony Brook Cancer Centre က လုပ်ခဲ့တဲ့...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ အသက်ကြီးလာရင်ဘယ်လိုကင်ဆာရောဂါတွေအဖြစ်များပါသလဲဆရာ။ ဖြေ။ကင်ဆာရဲ့သဘောတရားအရအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ကင်ဆာအမျိုးအစားမျိုးစုံက ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရင်ကဆိုရင် ကင်ဆာကို သက်ကြီးရောဂါ (Aging Disease)လို့ ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။အသက်ကြီးလေကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများလာလေပါပဲ။ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ (United Nation)၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရ နိုင်ငံအတော်များများမှာ အသက်၆၀နဲ့၆၅နှစ်အထက်ကို အသက်ကြီးသူတွေလို့...
ကလေးအသက်ကိုကယ်တင်ရန် ကင်ဆာကုသမှုကို ရွှေ့ဆိုင်းသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ချောမောစွာမီးဖွားပြီးနောက် ကွယ်လွန်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မစ်ဆူရီမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မိမိကလေးကို ကယ်တင်ဖို့ ခေါင်းမာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ကြေကွဲမှုနဲ့ အဆုံးသတ်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် ကာရာခွန်းဟာ သူရဲ့စတုတ္တမြောက်ကလေးကို ၂၃ ပတ်မြောက်ကြာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားချိန်မှာပဲ အရေပြားကင်ဆာ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးနေသော ကင်ဆာကုသနည်းသစ်အကြောင်း
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၁၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့ထုတ် TIME မဂ္ဂဇင်းတွင် “What if I decide to just do nothing?” ဆိုသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုဆောင်းပါးတွင် ဘက်စီလာဆိုသူ အမျိုးသမီးက...
လတ်ဆတ်သော နာနတ်သီး ဖျော်ရည်
လတ်ဆတ်တဲ့ နာနတ်သီးဖျော် ရည်တစ်ဖန်ခွက်သောက်တာကြောင့် သင့်ကို လန်းဆန်းစေနိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ နာနတ်သီးစိတ် အနည်းငယ် ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း နာနတ်သီးစိတ်တွေကို မွှေစက်ထဲထည့်မွှေပြီး ပျားရည်နဲ့ ရောမွှေပါ။ ပြီးရင် ရေခဲရေ တစ်ဖန်ခွက်ထည့်ပါ။ ရရှိသော အာဟာရဓာတ်များ နာနတ်သီးမှာ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့အတွက်...
မယ်လတိုနင်ဟော်မုန်း အထွက်တိုးစေမည့် အာဟာရ
၊ လရိပ်မေ ၊ မယ်လတိုနင်ဆိုတာ ဦးနှောက်ရှိ ပိုင်နီရယ်ဂလင်းက ထုတ်လိုက်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းက ရောင်ရမ်းမှု လျော့ကျ စေတဲ့အစွမ်းနဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် အစွမ်းတို့ရှိတဲ့အပြင် နှလုံးထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင်ကင်ဆာကို တွန်းလှန် နိုင်ပါတယ်။ မယ်လတိုနင်ရဲ့ ရေပန်းအစားဆုံးကဏ္ဍက...